Iyo Linux Foundation inoronga chirongwa chine chekuita nedrones | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura, Iyo Linux Foundation Yakazivisa ndiani acharonga chirongwa ichi InterUSS Platform Yakavhurwa Sosi Project nechinangwa che inogonesa kuvimbika, kwakachengeteka uye scalable kudyidzana pakati peUAS Service Provider (USS) inosimudzira yakachengeteka, yakaenzana uye inoshanda drone mashandiro Pakutanga vanopa vanosanganisira ese maindasitiri nemasangano anotonga Wing, AirMap, Uber, uye Swiss Federal Office yeCivil Aviation (FOCA).
Chokwadi ndechekuti, sezvakaitika mumigwagwa yemaguta, denga riri kuzara netraffic. Kuedza kutyaira hunyanzvi uye chengetedza chengetedzo, vatyairi vendege pasi rese vari kuita UAS Traffic Manejimendi (UTM, inozivikanwawo seU-Space) kutsigira inokura nekukurumidza uye kwakasiyana kwakasiyana kwedrone mashandiro Pasi peUTM, boka reUSS rinobatsira vanoshanda nedrone kuti vaite mabasa akachengeteka uye akarongeka.
Iyo Linux Foundation inoda kuti matenga ave akachengeteka
MaU.S. Vanogona kupa pamusoro pekuvharira nzvimbo dzemuchadenga uye kugovana dhata kana zvichidikanwa kutsigira masevhisi akadai sehurongwa hwekufamba nendege kusanzwisisika uye kuzivikanwa kure, uye indasitiri iri kuvandudza zviyero zvekugovana dhata uku kuburikidza nemasangano akaita seASMM Yepasi rose. Iyo purojekiti InterUSS inopa foramu yekubatana pamwe nekuvandudzwa kwemitemo-inoenderana yakavhurwa sosi yekushandisa iyo inofambisa kutaurirana muUTM / U-Space nharaunda.
Mike Dolan, mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zveLinux Foundation, anozvitsanangura seizvi:
Drones uye kusabatana kwavo zvinomiririra imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo dzekuvandudza muindasitiri yetekinoroji. Isu tinofara kutsigira iyo InterUSS chikuva uye yepasirose yekuvandudza nharaunda kusimudzira mashandiro edrone kutenderera pasirese.
Iyo Linux Foundation ndichashandisa yakavhurika hutongi hwemhando, iyo inosanganisira yeTechnical Advisory Council (TAC) inoumbwa nevazhinji vevashandi vehunyanzvi munzvimbo yedrone. Kubatanidzwa kweprojekti kunoonekwa nehurongwa hwekudzokorora uye hwekutenderedza hunotarisirwa neTAC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Linux Foundation yekugamuchira yakavhurwa sosi purojekiti yedrone yekufambisa ndege kusabatana